Maamulka Waqooyi-Bari Kenya oo oo Amar ku Bixiyay in la soo Saaro Maydadka Dad la raadinayay – Radio Daljir
Maamulka Waqooyi-Bari Kenya oo oo Amar ku Bixiyay in la soo Saaro Maydadka Dad la raadinayay
Diseembar 9, 2015 6:08 b 0
Somalia, December 09, 2015-(Daljir)_ Maxkamadda magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya ayaa ogolaatay in lasoo faago qabuuro loo malaynayo inay ku aasan yihiin dad la la’yahay.
Tallaabadan ayaa ka dambaysay markii la helay meelo lagu qariyay meydadka dad horay loo waayay oo katirsanaa dadka deegaanka.
Magaalada Mandheera ayaa waxaa gaaray qaar katirsan mas’uuliyinta laga soo doortay gobolka Waqooyi-bari, Kenya, hay’ado u dooda xuquuqda aadana iyo dad ku xeeldheer baaritaanka meydadka la doonayo in wax laga ogaado sida ay u dhinteen.
Dadka la helay meydadkooda ayaa waxaa kamid ah hooyo dhashay shan carruur ah oo toddobaad kahor laga kaxaystay goob ganacsi oo ay lahayd, dabadeedna meydkeeda lagu qariyay meel ilaa 30km u jirta magaalada.
Arrintaas ayaa dadka ku abuurtay walaac dhinaca amniga ah, waxayna wararku sheegayaan in Mandheera laga qabanqaabinayo bannanbax looga cabanayo arrintaas.
Waxaa jira tuhun ku saabsan in laamaha amaanka ee Kenya ay ku lug-leeyihiin dilal qarsoodi ah oo loo geystay dad la waayay oo goor dambe la helay meydadkooda
Duqa Degmada Garowe oo Kormeeray Suuqyada Caasimadda